Maxaa ka jira in Qabrigii Caroweelo ragga ay dhagax tuuraan dumarkana ubaxyo dhigaan! | Maxaa ka jira in Qabrigii Caroweelo ragga ay dhagax tuuraan dumarkana ubaxyo dhigaan! | Hal Sheegaha La Hubo
Maxaa ka jira in Qabrigii Caroweelo ragga ay dhagax tuuraan dumarkana ubaxyo dhigaan!
Raga dhagxaan ayay ku tuuraan goobtan, dumarkana ubaxyo ayay dhigaanLahaanshaha sawirkaAXMED CAWIL
Raga dhagxaan ayay ku tuuraan goobtan, dumarkana ubaxyo ayay dhigaan
Sheekada Caroweelo waa mid shaac ka ah Soomaalida dhexdeeda, waxayna nagu soo wada gaartay sheeko xariirooyinka laga dhaxlay awoow ka awoow, taas oo jiil kastaba uu jiil kale ka dhaxlayay.
Cidina si kalsooni leh uguma dhiiran karto in ay xaqiijiso jiritaanka Caroweelo, waqtiga ay noolayd, iyo in sheekooyinka laga sheego ay yihiin kuwa jira oo rasmi ah. Balse waxay dadka oo dhan isku raacsanyihiin jiritaanka sheekada Caroweelo run iyo mala’awaal midkay ahaataba.
Haddaba markale ayay sheekada Caroweelo saaxada timid kadib markii uu soo baxay muuqaal rag dhagax tuuraya meel la sheegay in ay tahay qabrigeedii iyo dumar ubaxyo dhigaya.
Caroweelo iyo Oday Biiqe
Sida lagu soo wariyay sheeko xariirooyinka, waxaa jiri jirtay haweenay boqorad ka ah gayiga Soomaaliyeed, taas oo lahayd awood aad u badan, raggani dhufaani jirtay si aysan u qooqin (xininyaha ka garaaci jirtay).
Waxay inta badan ragga ku xujeyn jirtay waxyaabo aan suurtogal ahayn, balse waxaa markasta xujadaasi furi jiray nin duurka ku dhuumaalaysanaya oo magaciisu ahaa ‘Oday Biiqe’.
Maxay heesta barbar caan ku noqotay oo ay u dhalisay xamaasad?
Mid ka mid ah xujooyinkii caanka ahaa ee ay ragga ku amartayna waxaa ka mid ahaa in ku tiri “ordaya oo ii keena udub dheer oo dhulka illaa cirka gaaraya”, kadibna raggii ayaa u tagay Oday Biiqe, una sheegay xujadii, wuxuu kula taliyay “ku laabta Caroweelo, oo waxaad dhahdaan, udubkaas waan keeneynaaye waxaad na siisaa udub kale oo aan ka cabir qaadano”.
Waxaa kale oo la sheegaa in Caroweelo iyo Oday Biiqe maalin la’isugu daray cunto soor ah oo lagu soo riday xeero, kadib waxaa dhacday in dhinicii ay xeerada ka cunaysay Caroweelo ay koosaartii (caanihii) ka dhamaatay, waxayna damacday in si dhagar ah ay caanaha uga soo jiidato dhanka Oday Biiqe, waxayna ku tiri “Oday Biiqoow hadalkii aad i tiri, sidaas ayuu qalbiga ii jeexay”, iyada oo markaas farteeda il kaga jeexaysa soorta si caanaha dhankeeda ugu soo hooraan, kana dhigaysa in ay wax u tilmaamayso.
Balse Oday Biiqe ayaa la fahmay sirtii, wuxuuna ku yiri “Caroweelo sheekadana waa lab iyo qas”, isaga oo gacantiisa ku walaaqay weelkii oo dhan si caanaha ugu wada qasmaan soorta.
Waxaa jirta goob ku taala meel u dhow magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, halkaas oo dadka deegaanka ay u aqoonsanyihiin in ay tahay qabrigii Caroweelo, halka dadka qaarkoodna ay u garanayaan in ay tahay halkii ay fariisan jirtay.
Midkay dooniba ha ahaatee, waxaa caado ah in ragga halkaasi maraya uu qofkiiba hal dhagax ku tuuro meeshaas, halka dumarka ay ubax ama caleemo qoyan saaraan goobta.
Dhawaan waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal laga soo duubay goobtaas oo dad rag iyo dumar isugu jira ay arrintaasi samaynayaan.
Wariyaha BBC-da ee Garoowe Axmed Cawil ayaa wareystay Mukhtaar Suudaani oo ah qofka muuqaalka kasoo muuqanaya, isaga oo dhagax ku tuuraya goobta oo ay tubanyihiin dhagxaan aad u badan.
“Waxaan maqlay in ay Caroweelo ahayd naag ragga aad u dhibaatayn jirtay, waloow dadka qaar ay qabaan in sheekadaas ay tahay mid la malo awaalay, dadkii ila socday ayaa waxa ay ii sheegeen in markan halkaan la marayo in ay ragga dhagxaan ku tuuraan, dumarkana in ay ubax dhigaan” ayuu yiri Mukhtaar Suudaani.
Sidoo kale waxaa BBC-da la hadashay gabadh lagu magacaabo Muno Siciid Axmed oo iyaduna kasoo muuqatay video-ga, waxayna tiri
” Waa caado Soo jireen ah. waa wax mudo soo socday anigu waxaan ubaxa u dhigay waxaan u arkaa Caroweelo inay ahayd haldoorka haweenka Soomaaliya, ragguna ka xun yihiin hormarka gabadhaas ay wakhtigaas sameeysa” ayay tiri.
Sababta ugu weyn ee ay raggu ku necebyihiin ayaa ah arrinta ah xininyahada ragga laga saarayo, balse Muno waxa ay leeyahay “Ma hubo inay ragga xiniinyaha ka saari jirtay laakiin haddii ay jirtay anigu kuma taageersani sababtoo ah waa aabahay iyo walaalkay”.
Caroweelo waa moowduuc buugaag xitaa laga qoray, meelo ka mid ahna ku jiri jirtay manhajka dugsiyada lagu dhigo ee Soomaaliya.
Marka laga sheekeynayo waa arrin dadka aad u xiiso galiso, qaarkoodna maad iyo kaftan ay u adeegsadaan, iyada oo ragga iyo dumarka ay isku xifaaliyaan.
Waxaaba jira dumar badan oo magacyadooda ku lamaaniyay ‘Caroweelo’, kuna qortay ciwaanadooda baraha bulshada.
Meeqaamka ay maanta dumarka ka joogaan hoggaanka Soomaalida iyo dooda ah qoondada dumarka ayaa micno gaar ah usii samaysay sheekada Caroweelo oo ah qofka kaliya ee dumar ah oo hoggaan sare ka qabata bulshada Soomaalida dhexdeeda, xitaa sheeko baraley ha iska ahaato haddii ay doontee.
Meelaha qaarkood Caroweelo waa magac qadiimi ah oo goobaha ganacsiga loo bixiyo sida idiinka muuqan karta sawirka hoose oo wariyaha maqaalkan qoray uu ka qaaday dukaan ku yaala magaalada Bangal oo u dhaxaysa Nairobi iyo Gaarisa ee dalka Kenya, waxaa sidoo kale sawirka ka muuqda dukaan ay ku qorantahay Oday Biiqe oo balse qoraal ahaan iyo cabir ahaanba ka yar dhismaha weyn ee Caroweelo lagu qoray.
Markii muuqaalka qabriga laga soo duubay lasoo dhigay baraha bulshada, dad badan ayaa aragtidooda ka dhiibtay, kuwaas oo siyaabo kala duwan u cabiray.
Qaarkood ayaa ku tilmaamay haweenay arxan daran oo ragga dhibaataysay, halka dad kalena ay sheegeen in ay ahayd haweenay sumcadda dumarka kor u qaada
Xigasho:- Cabdinaasir Saxansoxo